Sharci-dajiyayaasha gobolka ayaa ku soo laabtay Iowa Capitol maanta. Waxbarashada, canshuuraha, naba | KWIT
Somali News 01.11.21
Boqolaal qof --- waa yar yihiin, hadday jiraan, iyaga ka mid ah oo wejiyada daboolaya --- ayaa maanta lagu soo buuxiyay Iowa Capitol rotunda. Waxay ka mudaaharaadayeen indho-shareerka iyo talaabooyinka kale ee caafimaadka bulshada ee loogu talagalay in lagu yareeyo faafitaanka cudurka cusub ee coronavirus iyo cudurka faafa ee COVID-19.
Amarada caafimaadka bulshada ee Iowa ee hadda jira ayaa dadka uga baahan inay xirtaan waji-furka dadweynaha dhexdiisa markii ay ku jiraan gudaha iyo hareeraha kuwa kale in ka badan 15 daqiiqo.
Laakiin hoggaamiyeyaasha sharci dejinta ee Jamhuuriga ayaa go'aansaday in aan looga baahnayn booqdayaasha Capitol in ay xirtaan wejiga wajiga. 150-ka xildhibaan ayaa ku shiray Aqalka Madaxtooyada iyaga oo aan lahayn shuruudaha maaskaro iyo xeerar aan u baahnayn shaacinta imtixaanka COVID-19 ee togan.
Iowa maanta waxay leedahay 511 kiis oo cusub oo ah COVID-19 iyo 11 dhimasho kale. Gobolka waxaa ku dhowaad 300,000 oo kiis oo coronavirus ah tan iyo markii uu ka soo muuqday Iowa bishii Maarso. Waxaa jira in ka badan 4100 oo dhimasho ah.
Degmada Woodbury, waxaa ka jiray 27 kiis oo cusub oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Khudbadaha maalinta furitaanka ee golaha sharci dejinta ee Iowa caadi ahaan waa isku mid, iyada oo wadashaqeynta labada dhinac ay tahay mowduuc guud. Taasi ma ahayn maanta. Hogaamiyaha Dimuqraadiga ee Aqalka Todd Prichard ee magaalada Charles City wuxuu yiri isagoo 25 sano jir ah oo rug cadaa ciidan ah, wuxuu aad uga carooday wixii ka dhacay Capitol-ka Mareykanka Arbacadii la soo dhaafay.
Prichard wuxuu sheegay in xildhibaanada Iowa aysan "indhaha ka laaban karin" waxa sababay weerarkii todobaadkii hore lagu qaaday xarunta baarlamaanka Mareykanka. Khudbaddiisii ​​ugu horreysay ee uu ka jeediyo aqalka Aqalka sannadkan, ayuu Prichard ku sheegay markii uu Guddoomiyaha Gobolka Kim Reyolds difaacayo kuwa su'aal ka qaba sharci ahaanta doorashooyinkayaga, dillaac ayaa ku soo kordhay tiirka runta.
Dugsiga Degmada Sioux City Community School ayaa ku soo warramey in 28 arday ay ku soo warrameen COVID mid togan markii ay fiiriyeen maqnaanshaha 4ta iyo 5ta Janaayo.
Lambarkaasi wuu ka duwan yahay kana sarreeyaa qaabka warbixinta asalka ah.
Dugsiga degmadu wuxuu ku jiraa usbuuca labaad qaabkiisa isku dhafan, kaas oo kalabar ardayda ay aadaan dugsiga laba maalmood usbuucii iyo badhkii ay aadayaan laba maalmood oo kale. Gudiga iskuulka magaalada Sioux City ayaa kulmaya caawa si ay dib ugu eegaan qorshahooda ku noqoshada wax ka barashada waxayna ka wada hadlaan ikhtiyaariyada inta sanadka ka hartay.
By Halima Osman • Jan 7, 2021
[Written translation still to come]